Barbados kwupụtara nkwupụta banyere ndị njem Millennium Millennium Celebrity na-anwale ihe dị mma maka COVID-19
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ ọhụrụ Barbados » Barbados kwupụtara nkwupụta banyere ndị njem Millennium Millennium Celebrity na-anwale ihe dị mma maka COVID-19
Akụkọ ọhụrụ Barbados • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Ịtụ egwu • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Kemgbe ọ hapụrụ Barbados, ụgbọ mmiri ahụ kpọrọ oku na ebe atọ ndị ọzọ, ma na-alaghachi ugbu a na St. Maarten ebe ụgbọ mmiri ahụ ga-akwụsị n'oge.
Millennium Celebrity kwụsịrị na Barbados na Mọnde, Juun 7, 2021 dị ka ọdụ ụgbọ mmiri mbụ ya
Passengersgbọ njem Millennium abụọ a ma ama mere nke ọma maka COVID-19
Enwere ihe karịrị ndị njem 1200 na ndị ọrụ nọ n'ụgbọ mmiri ahụ kpam kpam
Millennium Celebrity ahụ hapụrụ ebe obibi ya nke Philipsburg, St. Maarten maka njem njem abalị 7 wee banye Barbados na Mọnde, June 7, 2021 dị ka ọdụ ụgbọ mmiri mbụ ya. A nwalere ndị njem niile tupu ha abanye na ụgbọ mmiri na-adịghị mma n'oge ahụ. Kemgbe ọ hapụrụ Barbados, ụgbọ mmiri ahụ kpọrọ oku na ebe atọ ndị ọzọ, ma na-alaghachi ugbu a na St. Maarten ebe ụgbọ mmiri ahụ ga-akwụsị n'oge.
Anyị na a gwara site anyị mmekọ na Lemara Amụma Njem Ndị njem na n'oge ngwụcha nke nyocha ụgbọ mmiri, ka ha na-alaghachi na St. Maarten, ndị njem abụọ nke ihe karịrị 1200 ndị njem zuru oke na ndị otu nọ n'ụgbọ mmiri ahụ, nwalere nke ọma maka COVID-19. Ha abụọ nwere nsogbu ma na-eme nke ọma. Anyị na-achọ ka ha gbakee ọsọ ọsọ.
Eziokwu ahụ bụ na nke a mere na njedebe nke oge ị na-eme njem ụgbọ mmiri, na-ewusi anyị ike na mkpa ọ dị ịgbaso usoro iwu niile n'oge niile. N'ịgbasochi usoro iwu anya na-enyere onye ọ bụla aka ịmaliteghachi ahụmịhe nke ndụ n'ụzọ dịkarịsịrị ka o kwere mee, ebe anyị maara na COVID na-anọnyere anyị, yabụ na anyị ga-eme mgbanwe. Nke a bụ ihe ndabere nke anyị obibia mgbe niile na ọ bụ ya mere na anyị maliteghachi iji jiri nlezianya na a mbụ ọnwụnwa cruise. Maka ịgagharị, anyị mepụtara ma tinye usoro ọgbụgba ntinye nke oke oke yana usoro dị ka njegharị nke afụ, iji nye anyị ohere ịhazi ijegharị na nchekwa ma nye maka ịchọta kọntaktị. Ọ dị oke mkpa na anyị niile ga na-agbaso usoro ogbugba ndu ka anyị na ndị obodo na-emekọrịta ihe ma nabata ndị njem.